कांग्रेसलाई भोट नहाले खानेपानी बन्द गरिदिने धम्की « Mechipost.com
कांग्रेसलाई भोट नहाले खानेपानी बन्द गरिदिने धम्की
प्रकाशित मिति: १० मंसिर २०७६, मंगलवार २१:५५
फिदिम, १० मंसिर
काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले आसन्न उपनिर्वाचनमा काँग्रेसलाई भोट नदिए खानेपानीको मुहान प्रयोग गर्न नदिने धम्की दिएको भन्दै फाल्गुनन्द गाँउपालिका वडा नं. १, साविक नवमीडाँडा गाविस वडा नं. ९ माझीटारका स्थानीयलाई गुनासो पोखेका छन ।
स्थानीय राम आङ्देम्बेका अनुशार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पहलमा तीन महिनाअघि यहाँका स्थानीयवासीका लागि पाइप ल्याई १२ घरलाई खानेपानीको ब्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीयवासीले यहाँको मायङखोला भन्ने स्थानमा खेर गइरहेको पानी पाइपबाट गाँउसम्म पु¥याएका थिए । उनीहरु सबै गत मंसिर ६ गते नेकपामा प्रवेश गरेका थिए ।
तर त्यसको भोलिपल्ट काँग्रेसका उम्मेद्वार, वडाध्यक्ष लगायतको टोलीले आएको र स्थानीय चन्द्र आङदेम्बेले काँग्रेसमा भोट नहाले उक्त खानेपानी मंसिर १५ गतेपछि बन्द गरिदिने धम्की दिएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय राम आङ्देम्बेले तीन महिना अघि नेकपाको पहलमा खानेपानीको प्रवन्ध भएकाले सोही दलमा स्थानीयवासी प्रवेश गरेको वताउनुभयो ।
स्थानीयका अनुशार उक्त खानेपानीको मुहान रहेको स्थान ओइल्यानी जग्गामा पर्छ । यहाँको पानी विगतमा सिंचाईका लागि कुलो मार्फत अन्यत्रै लैजाने गरिएको थियो । तर पानी लगेर धान खेती गर्ने जग्गा तीन वर्षअघि बाँझिएपछि उपभोग नभएको पानी आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय नरेन सम्बाहाम्फेको भनाई छ । खेर गएको पानी आफूहरुले सदुपयोग गरेको र धम्की दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
“काँग्रेसको उम्मेद्वार सहित वडाध्यक्ष समेत गएर त्यो ठाँउलाई पानी बन्द गरिदिने भन्नुभएछ । यो कतिको जायज कुरा हो ? यसले के सन्देश लैजादो रहेछ ? किन यस्तो गरियो भन्दा धम्की दिइएको भन्ने बुझियो” स्थानीय राम आङ्देम्बेले भन्नुभयो । यस स्थानमा खानेपानीको समस्या छ ।